जीवनरूपी खेत – Chitwan Post
यदि कुनै खेतीयोग्य जमिन छ तर हामीले त्यस खेतमा खेती गरेनौँ, मिहिनेत गरेनौँ भने त्यो जमिन बिस्तारै–बिस्तारै बाँझो हुन थाल्छ । यदि त्यस जमिनमा राम्रो बीउ रोपेनौँ, पानी लगाएनौँ भने त्यो खेत जसमा पहिला हरियाली हुन्थ्यो त्यहाँ मानिसका लागि काम नलाग्ने झारहरू उम्रिन थाल्छन् । त्यो खेत बिस्तारै–बिस्तारै खेतीका लागि अयोग्य हुन थाल्छ ।
यस्तै गरेर हामीले पनि जीवनरूपी खेत पाएका छौँ । यस खेतमा हामीले कतिको परिश्रम गरिरहेका छौँ ? यस खेतमा हामीले कुन–कुन बाली लगाएका छौँ ? कुनचाहिँ बाली फलाएका छौँ ? यदि यस खेतमा हामीले मिहिनेत गरेनौँ, पानी हालेनौँ भने यो पनि बिस्तारै–बिस्तारै बाँझो हुँदै जानेछ ।
प्रेम रावत भन्नुहुन्छ– हामी हाम्रो जीवनरूपी खेतमा प्रत्येक श्वाससँगै केही न केही रोपिरहेका छौँ । चाहे हामीले बीउ रोप्ने कोसिस गरौँ या नगरौँ, बाली त लगाइँदै छ । बाली त उम्रने नै छ ।
यदि हामीले बीउ नरोपियोस् भन्ने चाहना राख्यौँ भने यो पनि सम्भव छैन । के मात्र सम्भव छ भने हामी कुनचाहिँ बीउलाई रोप्न चाहन्छौँ र कुनचाहिँ बाली उमार्न चाहन्छौँ । हरेक अनमोल श्वास जुन हामीभित्र आइरहेको छ, यसले हाम्रा लागि जीवन लिएर आउँछ । जसले गर्दा हामी मुस्कुराउन सक्छौँ अनि आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौँ । आज जे जति हामी यस संसारमा गरिरहेका छौँ– जस्तो कि ठूला–ठूला आविष्कार, भौतिक सुख–सुविधाको विस्तार । यी सबै यही श्वासकै कारणले सम्भव भएका हुन् ।
हामी पनि प्रत्येक श्वासका साथ जीवनरूपी खेतमा त्यो बीउलाई रोपौँ जसलाई फलाएपछि हामीले जीवनमा दुःखी हुनु नपरोस् । हामीले जीवनमा यस कुरालाई राम्ररी स्वीकार ग¥यौँ भने मात्र यो जीवन प्राप्त हुनुको सार्थकता रहन्छ ।
उठ्नुहोस् ! ब्युँझनुहोस् ! आँखा खोल्नुहोस् ! अनि आफ्नो यस दिनलाई प्रारम्भ गर्नुहोस् । ब्युँझने समय भइसकेको छ । किनभने हामीले आजसम्म जेजति एकदमै राम्रा सपना देखेका छौँ, ‘वास्तविकता’ चाहिँ ती सारा सपनाभन्दा पनि उत्तम छ – ‘यो श्वासको वास्तविकता ।’ यसको कुनै मूल्य छैन । यो अनमोल छ अनि सदैव हामीसँगै छ । जुन दिन यो हुनेछैन, हामी पनि रहँदैनौँ । हामी जे छौँ यही श्वासकै कारणले छौँ । यसमा त्यो आनन्द छ जसलाई हामी सधैँ पाउन चाहन्छौँ ।
हामीले अहिलेसम्म जीवनमा सधैँ रहिरहने स्थायी आनन्दलाई त अनुभव नै गरेका छैनौँ । अब हामी आफ्नो जीवनरूपी खेतमा त्यो बीउलाई रोपौँ जसको फल प्राप्त भएपछि हामी त्यही आनन्दमा रहन सक्छौँ ।
प्रेम रावत भन्नुहुन्छ– हामी यो जीवनरूपी खेतलाई बाँझो हुन नदिऊँ । किनभने, बाँभैm राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । वास्तवमा हामीभित्र त्यो जीवनरूपी खेतलाई हराभरा बनाउने, त्यसबाट आनन्द लिने सम्भावना छ ।
प्रेम रावत मानवता र शान्तिका बारेमा चर्चा गर्नुहुने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । शान्ति प्राप्त गर्ने प्रेरणा दिनुभएकाले विश्वका थुप्रै सरकारी तथा शैक्षिक संस्थाहरुद्वारा उहाँलाई शान्तिदूतको उपाधि प्रदान गरिएको छ । हालै मेलेसियामा उहाँलाई ‘एसिया प्यासिफिक ब्रान्ड फाउन्डेसन’ ले ‘लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ द्वारा सम्मानित गरेको छ ।
उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्नका लागि www.premrawat.com र www.timelesstoday.tv वेबसाइटहरूमा पनि हेर्न सकिनेछ । प्रतिक्रियाका लागि [email protected]
मानवीय अनुशासनको आधार : अध्यात्मज्ञान
छवि सुधार्न राजनीति नै सुध्रिनुपर्छ
चीन र भारत छिमेकी हुन्, आफन्त होइनन्